တော်ဝင် ဦးကိုကိုထွေးနှင့် အင်တာဗျူး| MM Cities
MCB bank မှ CEO and M.D ဒေါက်တာ သောင်းဟန် ရုပ် နှင့် နာမ် ဆိုသည်မှာ ရင်သား လှပရန်အတွက် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု စတီဗင်ဟော့ကင်း ထင်နေသော လူသားများကို ခြိမ်းချောက်နေသောအရာ ကြီးပွားတိုးတက် ချမ်းသာခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ
HomeBlogsMMcities's blogတော်ဝင် ဦးကိုကိုထွေးနှင့် အင်တာဗျူး
တော်ဝင် ဦးကိုကိုထွေးနှင့် အင်တာဗျူး
Interview Mar 20,2017 1160MMcities
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့ အကြောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်က တော်ဝင်မိသားစု ကုမ္မဏီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုထွေးပါ။ တော်ဝင်မိသားစု ကုမ္မဏီကို စတင်တည်ထောင်လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ construction ကို အဓိကထားပြီး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ construction ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ အထောက်အကူပြုဖို့အတွက် furniture factory ကိုလည်း တည်ထောင်ထားပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ တော်ဝင်စင်တာနဲ့ တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟော်တယ်ကိုလည်း ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ construction အနေနဲ့တော့ အဓိက ကတော့ အဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲ အဓိကဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟော်တယ်နှင့် တော်ဝင်စင်တာကိုလည်း ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်သလို ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ construction ရဲ့ အဓိကအများဆုံးတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာတွေကတော့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေ တည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေကတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ အခုချိန်ထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမှာ (၃၅) လမ်းနဲ့ (၇၆) လမ်းမှာ သီရိရိပ်သာ (၁) ဆြို့ပီးတော့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်တွေ တည်ဆောက်ပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ပေ ၃၀× ၆၀ ပေါ့။ နှစ်ထပ်တိုက်ကို အဲဒီအချိန် အဲဒီကာလမှာ (၂၄) သိန်းနဲ့ ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ တော်ဝင်အိမ်ရာနဲ့ မဟာမြိုင်အိမ်ရာဆိုပြီးတော့ မြောက်ဒဂုံမှာ တည်ဆောက်ပါတယ်။ တော်ဝင်အိမ်ရာကိုတည်ဆောက်တုန်းကတော့ (၁) ခန်းကို (၃) သိန်းလောက်နဲ့ တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ square feet 600 လောက်ရှိပါတယ်။ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ ပါတယ်။ ဒါကတော့ အဓိက ကတော့ ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုလို့ သူ့ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မြေ ၈ ဧက ပေါ်ထပ်ပြီးတော့ အခန်း (၁၄၀၀) လောက်ကို ၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံအတွက်ဆိုပြီးတည်ဆောက်ပြီးတော့ တစ်ခန်းကို (၁၂) သိန်း ခွဲလောက်နဲ့ ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေ တည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပထမစလာခဲ့တာပါ။
မေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဆရာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ ခန့်မှန်းခြေ ဘယ်နှစ်ခုလောက် ဆောက်ပြီးသွားပြီလဲဆရာ။
ဖြေ ။ ။ အခု သီရိရိပ်သာမှာ (၇၈) လုံး၊ လုံးချင်းအိမ် (၇၈) လုံးတည်ဆောက်ပြီးခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ပြီးတော့ မြောက်ဒဂုံမှာ မဟာမြိုင်အိမ်ရာနဲ့ တော်ဝင်အိမ်ရာကို အခန်း (၂၃၀၀) ကျော်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ မုဒိတာအိမ်ရာ (၁) နဲ့ (၂) ကို အခန်းပေါင်း (၃၅၀၀) လောက် တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခန်းအရေအတွက်အားဖြင့် တွက်မယ်ဆိုရင် အခန်း (၅၀၀၀) ကျော် တည်ဆောက်ပေးပြီး လုံးချင်းအိမ်ရာ (၇၆) လုံးရယ်၊ ရန်ကုန်မှာ မြေနဲ့ လုံးချင်းအိမ်ရာလေးတွေ အနည်းငယ်စီ တည်ဆောက်ပေးပြီးတော့ ရောင်းခဲ့ပေးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မြောက်ဒဂုံမှာ အုတ်တံတိုင်းခတ်ပြီးတော့ ကွန်ကရစ်လမ်းတွေ၊ facility တွေလုပ်ပေးပြီး ပေ (၁၀၀) ပတ်လည်ကို သိန်း (၄၀) နဲ့ ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တန်ဖိုးနည်းဆိုတာက အဲဒီ့ သူ့ခေတ်သူ့ကာလမှာ သိန်း (၁၀၀) ပေါက်ရင် သိန်း (၅၀) နဲ့ ရောင်းမယ်။ သိန်း (၅၀) ပေါက်ရင် သိန်း (၂၀) သိန်း (၂၅) နဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရောင်းမယ်ကို ပြောတာပါ။ တန်ဖိုးနည်းဆိုတာက အရည်အသွေးတွေ ကျပြီးတော့ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ အိမ်ခန်းတွေတည်ဆောက်ပြီးရောင်းတာ တန်ဖိုးနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဖိုးနည်းဆိုတာက တကယ် သူ့ကာလပေါက်ဈေးနဲ့ အများကြီးနည်းပြီးလျော့ရောင်းတဲ့အတွက် တန်ဖိုးနည်းလို့ပြောတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ တကယ်ရောင်းနိုင်တဲ့ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင် ဒီ မုဒိတာအိမ်ရာတွေမှာ မြေညီထပ်ကို ကျွန်တော်ရောင်းတာက (၁၆၅) သိန်း သူတို့ရောင်းတာ သိန်း (၅၀၀) နဲ့ သိန်း (၈၀၀) ကြားထဲမှာ ဖြန့်ပြီးတော့ ရောင်းချသွားကြတာ၊ ကျွန်တော် (၁၆၅) သိန်းကနေ (၃၃၀) ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော် ရောင်းလို့ရတယ်။ အခန်းပေါင်းမြောက်များစွာ ရောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တစ်ခန်းကို သိန်း (၂၀၀) လောက် အမြတ်တင်ရောင်းမယ်ဆိုရင် ၀ယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တန်ဖိုးနည်းတော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်း အခန်း (၃၅၀၀) ကို သိန်း (၂၀၀) တင်ရောင်းမယ်ဆိုရင် သိန်းပေါင်း (၇) သိန်းလောက် အကျိုးအမြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အကျိုးအမြတ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တကယ့်တန်ဖိုးနည်းကို ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် ဒီဟာကို တကယ့်တန်ဖိုးနည်းလို့ ခေါ်တာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင်လို့ လုပ်တဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့ အဆောက်အဥိးဆောက်လုပ်တဲ့ အခန်းမှာ စနစ်ကျတဲ့ တည်ဆောက်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးကို သူများထက်ပိုပြီးတော့ လျော့ချအောင်လည်း တည်ဆောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီအပေါ်မှာ စေတနာထားပြီးတော့ အကျိုးအမြတ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲ ယူတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အဆောက်အဥိးတွေရဲ့ ရောင်းချတဲ့ အမြတ်အရမ်းနည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ အဲဒီတော့ ဆရာပြောချင်တဲ့သဘောက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဆိုပေမဲ့ ဆရာအမြတ်ကိုအများကြီးမယူပဲနဲ့ quality ထိန်းပြီးတော့ customer တွေ မေတ္တာနဲ့ ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာ့ရဲ့ အိမ်ရာတွေကို တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာလို့ သတ်မှတ်တာပေါ့နော်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာလို့ သတ်မှတ်တာ တစ်ချို့က တန်ဖိုးနည်းဆိုတာ အရည်အသွေးကျလို့ ဒီလိုမျိုးတွေ ပြောကြတာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ အရည်အသွေးကျလားမကျလားဆိုတာ ကျွန်တော် မုဒိတာအိမ်ရာ၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဆိုပြီး ရောင်းပါတယ်။ တကယ်လည်း သူများထက် ဈေးနည်းအောင်ရောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ၀ယ်တဲ့လူတွေ ၀ိုင်းအုံလာတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးရတဲ့အထိတောင် အရမ်းရောင်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတာက ၀ယ်တဲ့သူက တစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်။ ရောင်းနိုင်တာ (၃၀၀၀) ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီတိုက်ခန်းတွေကို မဲဖောက်ပြီးတော့ ကျတဲ့အခန်းကို ရတဲ့အခန်းကို ယူရတဲ့အထိ တိုက်ခန်းရောင်းခဲ့ရတာပါ။ ဒါကလည်း တိုက်ခန်းရဲ့ quality အားဖြင့်တော့ တစ်ချို့ကလည်း စိတ်ထဲမှာ သံသယဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာကို ရောင်းပြီးတော့ ဒီအိမ်ရာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘယ်သူတွေနေလဲလို့ သွားကြည့်ရင် အမေရိကန်တွေလည်း နေပါတယ်။ ဂျပန်တွေလည်း နေပါတယ်။ ကိုးရီးယားတွေလည်း နေပါတယ်။ အဲလို ကျွန်တော် မုဒိတာ (၁) အိမ်ရာမှာဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေ ၀င်ရောက်နေထိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာရဲ့ ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆရာက ဈေးကွက်ဖြတ်တဲ့သူလို ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ သူတို့ဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်လည်း မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဈေးကွက်ကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် (၄၅) သိန်းနဲ့ ရောင်းမယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဈေးကို ဘယ်တုန်းကမှ ဘယ်သူမှ လိုက်ပြီးတော့ ယှဉ်ပြီးတော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ တစ်ယောက်လိုက်ပြီးတော့ ယှဉ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကလည်း စေတနာနဲ့ဆိုတော့ သူ့နေရာမှာ ရောင်းပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူလည်း ရှုံးသွားပြီးတော့ နောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ရဲတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီိလိုပဲ ကျွန်တော် (၄၅) သိန်းနဲ့ ရောင်းမယ်။ တိုက်ခန်းကို ပါကေးခင်းပေးမယ်။ ကြွေပြားခင်းပေးမယ်။ LED ပါတပ်ပေးမယ်။ ဓါတ်လှေကားတပ်ပေးမယ်။ infrastructure အနေနဲ့တော့ ကွန်ကရစ်လမ်းတွေပါတယ်။ အခုနောက် (၄၅) သိန်းတန်မှာ ဆေးရုံတွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းတွေ အကုန်လုံးကို facility တွေ အပြည့်အစုံနဲ့ ပါသင့်ပါထိုက်တဲ့ facility တွေ ထည့်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ ကျောင်းတွေကတော့ ပိုက်ဆံယူတဲ့ ကျောင်းမဟုတ်ပါဘူ။ ဒါ အစိုးရကို ပြန်လှူပြီးတော့ ဒီမှာလူတွေကျောင်းပြန်တတ်လို့ရအောင်၊ ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေ ဆေးပြန်ကုလို့ရအောင် အစိုးရကို ပြန်အပ်ပြီးတော့ ဆေးကုလို့ရတဲ့ ဆေရုံတွေ၊ ကျောင်းတတ်လို့ရတဲ့ ကျောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စီးပွားရှာတဲ့ ဆေးရုံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က facility ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ လုပ်ပြီးတော့မှ (၄၅) သိန်းနဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတာကို သူများတွေအတွက် အံ့သြစရာဖြစ်သလို သူတို့လည်း လိုက်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့က တိုက်ခန်းကို (၄၅) သိန်းနဲ့ရောင်းတဲ့အတွက် ဒီဘက်မှာ သိန်း (၂၀၀) ကျော်(၃၀၀) နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ တိုက်ခန်းငယ်လေးတွေကို သွားပြီး ထိခိုက်တာပေါ့။ ထိခိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒါဈေးကွက်ဖြတ်တယ်လို့ ပြောကျမှာပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဈေးကွက်ဖြတ်တာ မဖြတ်တာကို အာရုံမစိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အာရုံစိုက်တာက ကျွန်တော်တို့အခြေခံ လူတန်းစားတွေ နေရေးအင်မတန် ကြပ်ပါတယ်။ နေရေးအင်မတန်ခက်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ လုပ်ခလစာတွေအများကြီးလိုချင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ မပေးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှုတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ပြဿနာကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြေရှင်းခြင်းဟာလည်း တစ်နည်းပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ ကျူးကျော်နေထိုင်ရသူတွေ တကယ်တော့ ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မနေနိုင်လောက်ပါဘူး။ ဈေးကွက်၊ ကျောင်း၊ လမ်းချိုလမ်းကြား၊ သူများသွားလို့ အဆင်မပြေတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်သလို တဲထိုးပြီးတော့ နေကြတဲ့ ကျူးကျော်တွေပါ။ သူတို့ဘ၀မှာ အဲဒီကျူးကျော်တောင်မှ တစ်ချို့ဆိုရင်တစ်လကို (၃၀၀၀၀) လောက်ပေးပြီးတော့ လူတစ်ယောက်စာ၊ တစ်ကိုယ်စာ နေနိုင်အောင် ငှားနေရတဲ့ ဘ၀မျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ အဲဒီလူတွေ စနစ်တကျနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့တင့်တောင်းတင့်တယ်နေနိုင်အောင် အခြေအနေကိုရောက်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ဒီဟာကို ရအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီ မုဒိတာအိမ်ရာစီမံကိန်းတွေဟာ အများပြည်သူရဲ့ အကျိုးကို ဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆောက်မှာ အခန်း (၃) သိန်းပါ။ အဲဒီတော့ အခန်း (၃) သိန်း ဆိုတာကတော့ သူများတွေ ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တစ်သက်မှဘယ်လိုမှမေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည့်အောင်လည်း ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ တစ်နေ့ကို အခန်း (၂၀၀) ပြီးတဲ့နှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်ကို (၆) သောင်း၊ နောက် (၅) နှစ်ကျရင် (၃) သိန်းပြည့်မှာပဲ။ ဒါက ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလုပ်မဲ့ကိစ္စပါ။ တွက်တာပါ။ တကယ်လို့များ ကျွန်တော့လိုလုပ်နိုင်တဲ့သူ (၅) ယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ထဲနဲ့လဲ ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခန်း (၃) သိန်းလောက်သာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွေ အားလုံးလဲ ရှင်းသွားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း အကျိုးရှိသလို နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်း အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာကို တည်ဆောက်နိုင်ရတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကို ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ အဓိကအခြေခံကျတာကတော့ ဒီဇိုင်းပေါ့။ တန်ဖိုးနည်းအောင် တည်ဆောက်ရတဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ circulation area တွေနည်းပြီးတော့ effective area တွေ များရမယ်။ structure ပိုင်းမှာလည်း ခိုင်ခံ့မှုကို မလွဲမသွေဦးစားပေးရတယ်။
Struture ကို ပိုခိုင်မာပြီး တန်ဖိုးသက်သာမယ့်အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ လေးထောင့်ပုံကျပြီး အချိုးစားညီမျှရင် ရပါပြီ။ နည်းပညာနည်းစနစ်တွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ၊ ဒီဇိုင်းတွေ အဲဒီသုံးခုကို သေချာနားလည်ပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်
မေး ။ ။ ဒီဇိုင်းကိုရော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ခေါ်သုံးလား။
ဖြေ ။ ။ ဒီဇိုင်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဆွဲတာပါ။
မေး ။ ။ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာဆိုရင် ပြင်ပလောကမှာ အရည်အသွေးနိမ့်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်း နည်းပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ၊ ဒီဇိုင်းတွေကို သေချာမလုပ်ဘဲနဲ့ လုပ်တဲ့အခါ ကုန်ကျစားရိတ်က မသက်သာဘဲနဲ့ မြင့်လာပါတယ်။ ထိုနည်းတူပဲ တန်ဖိုးနည်းဟု
မပြောနိုင်ဘဲ တန်ဖိုးသင့်ဟု ပြောင်းလဲသုံးနှုန်းပြီးတော့ အရည်အသွေးတွေလည်း လျော့နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆောက်တဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေမှာ အရည်အသွေးကောင်းအောင် System ကောင်းကောင်းနဲ့
ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းလျင် တစ်နေ့ရှစ်နာရီ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို နှစ်နာရီလောက်နဲ့လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာကတော့ အလုပ်သမားတွေက
ပစ္စည်းတွေကို စောင့်၍ပြုလုပ်နေရပြီး (တစ်နည်းအားဖြင့်) ပစ္စည်းများ အဆင်သင့်မရှိသဖြင့် လိုအပ်သောနေရာ အလွယ်တကူမရောက်သဖြင့် အချိန်ကြာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် လုပ်သားတစ်ယောက်ကို တစ်နေ့အနည်းဆုံး
တစ်သောင်းခန့်ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါသည်။ တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင် ရောင်းတာကလည်း တန်ဖိုးနည်းဖြစ်အောင် ရောင်းတယ်။ အလုပ်သမားခကိုလည်း တစ်ခြားလူတွေက ၃၆၀၀ တောင် မပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ၁၀၀၀၀
၀န်းကျင် ကျွန်တော်ပေးတယ်။ အဲဒီမှာ နည်းပညာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုမကောင်းရင် မရပါဘူး။ အကုန်လုံး အိတ်စိုက်လုပ်နေရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အများစု စီးပွားရေးအဆင်မပြေရတဲ့ အကြောင်းရင်းက system မကောင်းလို့ပါ။
အုပ်ချုပ်မှုတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ system ကို ဘာမှမသုံးနိုင်ကြဘူး။ system ကောင်းရင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဘာလုပ်ရမယ်။ ဘယ်သူ့ကို ဘာခိုင်းရမယ်ဆိုတာ စနစ်တကျ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အလေအလွင့်နည်းသွားပါတယ်။
မေး ။ ။ နည်းပညာအကြောင်းတွေကိုလဲ နည်းနည်းပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ Form Work ( Frame Work) က အရေးကြီးပါတယ်။ အများစုက သစ်သားကိုပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဥပမာ - အခန်းသုံးသိန်း ဆောက်မယ်ဆိုရင် သစ်တန်ချိန် သုံးသိန်းကုန်မယ်။ ဒီ သစ်တန်ချိန်တွေကို ဆယ်ခါသုံးမယ်ဆိုရင်
ကုန်ကျစားရိတ်က အင်မတန်များပါတယ်။ သစ်သားက ဘယ်လောက်ပဲ ချွေချွေတာတာသုံးသုံး ငါးကြိမ်ထက် ပိုမရနိုင်ပါ။ သံကို သေချာသုံးလျှင် တစ်သက်လုံးနီးပါး အသုံးခံပါတယ်။ အရည်အသွေးကလည်း သေသေချာချာ
ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ပိုပေါ့ပါးပြီး စနစ်ကျပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် လက်ချုပ်အထည်ချုပ်နှင့် စက်ရုံချုပ်အထည်ချုပ် ကွာသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ သစ်မသုံးပဲ သံကို သုံးရင် တန်ချိန်များလျော့ချနိုင်ပြီး
ကုန်ကျစားရိပ်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၀န်တွေလဲ အများကြီးပေါ့သွားတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေလဲ သက်သာတယ်။ သယ်ယူရာတွင် ၀န်ပေါ့သဖြင့် သယ်ဆောင်ခစားရိပ်သက်သာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလုပ်သမားစားရိပ်ကော
သယ်ဆောင်ခစားရိပ်ကော Frame Work စားရိပ်ကော သုံးခုလုံး သက်သာသွားစေပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားတွေကို ပြည်တွင်းလုပ်သားတွေပဲလား။ ပြည်ပ လုပ်သားတွေ ပါသေးလား။
ဖြေ ။ ။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဘယ်လိုပုံစံထုတ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အရင်လုပ်ကြည့်တယ်။ ပြီးမှ လုပ်သားခေါင်းဆောင်တွေကို ကျွန်တော်ပြောတယ်။ သူတို့က တစ်ဆင့် လုပ်သားအကုန်လုံးကို
ပြန်ပြောတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို ပြင်ပပညာရှင်တွေ မခေါ်ပါဘူး။ တစ်ချို့လုပ်ငန်းကြီးတွေတော်တော်များများ ပြည်ပပညာရှင် အကူအညီနဲ့ တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ကြံဆပြီး
ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်ဆိုရင် ကျွန်တော့ဟော်တယ်မှာ အခန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေအများစုက ပြည်ပအကူအညီယူမှရမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မြန်မာလူမျိုးတွေ မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဟု
အကြံပြုပြောဆိုကြတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က လက်မခံပါဘူး။ ကျွန်တော်က သူတို့ကို ပြန်ပြောတယ်။ ဟော်တယ်ကို ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ရင် အိမ်ခန်းတွေပါပဲ။ ပိုလာတာကတော့ Reception ပေါ့။ ဒါတွေက အခန်းကို
ဘိုကင်လုပ်ရတယ်။ Check in , Check out လုပ်ရတယ်။ ဒါတွေက အကြမ်းမျဉ်း ပြန်ပြောရင် Sales and Marketing နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်သွားဖြစ်နေပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ မတူညီဆုံးအချက်ကတော့ ဟော်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်
အဆင့်အတန်းမြင့်မြင်ကောင်းကောင်း ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးရပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြန်ကြည့်ရင် ခက်ခဲတယ်လို့ လုံးဝမထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လည်း နိုင်ငံခြား ပညာရှင်တွေကို လုံးဝမခေါ်ထားပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီက
၀န်ထမ်းတွေက ပြည်တွင်းဝန်ထမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိတဲ့ လူတွေကိုလည်း ကျွန်တော်က Training သေချာပေးပြီးတော့ လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဟော်တယ်က ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဟော်တယ်အလုံး ၂၀၀
ကျော်ထဲမှာမှ အဆင့် ၁၈ ရှိပြီး အောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဟော်တယ်က တည်နေရာကော ၀န်ဆောင်မှုကော ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဟော်တယ်အဆင့်သတ်မှတ်တဲ့ လူတွေထံမှ သိရပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို
ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဟော်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာရော ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေ သုံးသေးလား။
ဖြေ ။ ။ သုံးပါတယ်။ ဒါကလည်း အော်ပရာဟော်တယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို သုံးပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း နောက်နှစ်တွေကျရင် အသုံးပြုတာ ရပ်နားပြီးတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်တီထွင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုဖို့ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို နိုင်ငံခြားသားမှ လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းမှာလည်း လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြချင်တဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာ့ရဲ့ တော်ဝင်မိသားစုအောက်မှာ ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အောက်မှာတော့ များများစားစားမရှိပါဘူး ကျွန်တော်တို့ Construction လုပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလဲ လုပ်
ပါတယ်။ ပြီးတော့ တော်ဝင်စင်တာဆိုပြီး ကုန်တိုက်လုပ်ငန်းတွေ လဲလုပ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာဆီမှာ ခန့်မှန်းချေ ၀န်ထမ်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ၀န်ထမ်းက အရင်တုန်းက ၅၀၀၀ကျော်ကျော် ၆၀၀၀လောက်ရှိတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကလုပ်ငန်းလဲ နည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ ၀န်ထမ်းလုပ်သား အားလုံးပေါင်းမှ ၃၀၀၀ လောက်ဘဲရှိတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာ ဒီစီးပွားရေးတွေကို ဒီလိုလုပ်တတ်လာတာ ကူညီပေးတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆရာ့မိဘရဲ့ ထောက်ပံပေးမှုတွေရော ရှိလား။
ဖြေ ။ ။ အဖေအမေကတော့ တိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျွန်တော် လုပ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ ဆိုပြီး သုံးခုရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘယ်အရာမဆို ကြုံတဲ့နေရာမှာ
ပညာသင်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားတယ်။ မူလတန်းကတည်းက အမေကို ဈေးဝယ်လိုက်ရင်းနဲ့ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကူညီတဲ့အချိန်မှာ အမေက ဈေးဝယ်တာ ဘာကြောင့် စောစောထွက်လာတယ်။
စောစောထွက်တဲ့အတွက် ရွေးဝယ်လို့ရတယ်။ ဈေးစစ်လို့ရတယ်။ ပစ္စည်းအမှန်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြတယ်။ ဒါ ၀ီရိယကြောင့် ရတယ်လို့ ရှင်းပြတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကန်ဇွန်းရွက်ဝယ်တယ်ဆိုရင် ကြော်စားမှာလား၊
တို့စားမှာလား၊ အဲဒီအခါမှာ ၀ယ်ရမဲ့ ကန်ဇွန်းရွက်အကြောင်း ရှင်းပြတယ်။ အလားတူ ချဉ်ပေါင်ရွက်အကြောင်း စသည်ဖြင့် ရှင်းပြတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုဝယ်ရတယ်။ quality ဘယ်လို check ရတယ်။ စသည်ဖြင့် သင်ပေးသည်။
ဟင်းဝယ်တဲ့အခါမှာ ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဘယ်လို လုံလောက်အောင် စီမံဝယ်ရတယ်။ ချက်တဲ့အခါမှာလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ အချိန်ကိုက် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ စသည်ဖြင့် ပြောရင်း သင်ပေးတယ်။ ၀ီရိယအရေးပါပုံ၊ ပစ္စည်းဝယ်ခါနီး
အရည်သွေးစစ်တတ်လာပုံ၊ အချိန်ကိုက် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာတွေ ငယ်စဉ်ကပဲ အမေ့ဆီက ရခဲ့တယ်။
မေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသိချင်တာက ဆရာကိုအိမ်ကပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာလားဆရာ။
ဖြေ ။ ။ အဲ့ဒီတော့လက်ဆင့်ကမ်းတယ်ဆိုတာ ထက်လိုအပ်တဲ့ အသိလေးတွေကို မိဘတွေဆီကသင်ယူလို့ရခဲ့တာပေါ့ အဖေကစီပွားရေးကိုဘယ်လိုကြိုးပမ်း ခဲ့လည်းဆိုတာ လေတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကထဲက
အတူတွဲလုပ်လာတဲ့ မျက်စီရှေ့မှာလဲလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒါလေတွေကိုလဲ သင်ယူလို့ရတာပေါ့ ဒါပင်မဲ့အဖေရဲ့စကာလေးတွေကလဲ ကျွန်တော်ဘ၀မှာအများကြီးအသုံးတဲ့ခဲ့တယ် ဘာပြောလဲဆိုတော့ သားစီမံခန့်ခွဲမူပညာဆိုတာ လောကမှာ
တန်ဖိုးအရှိဆုံး စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူဟာ ပညာရှင်တွေအာလုံးကိုလဲအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလဲလုပ်နိုင်တယ် စီမံခန့်ခွဲတက်တဲ့သူဟာ နောက်ဆုံး သမ္ဗတတောင်ဖြစ် နိုင်တယ်။
အဲ့ဒီတော့ဆရာ ကျွန်တော်တို့ဒီစီပွားရေးတွေအကုန်လုံး ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တာဘာကြောင့်လဲဆရာ ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဘဲကြိုးပမ်းတယ် အဲ့ဒီတော့ မိဘရဲ့အုပ်ထိန်းမူအပေါ် မှာ မူတည်ပြီတော့ အဲ့ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲမူနေရာမှာ
ကူလီထမ်းရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကောင်တယ် ကူလီကောင်းက မထမ်းရဘဲနဲ့ ပိုက်ဆံပိုရတယ် ဒါဟာစီမံခန့်ခွဲမူအတက်ပညာဘာဘဲ ဒါကြောင့်မို့လို စီမံ
ခန့်ခွဲမူအလုပ်ကို နာလည်အောင်လုပ်ပါလို့ ဒါဟာမိဘရဲ့လမ်းညွှန်ကြားမူပေါ့နော် နောက်သင်ကြားတာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့နော် ကံ၊ ဥာဏ်၊၀ီရိယသုံးပါးညီမှကြီးပွားချမ်းသာမယ် အဲ့ဒီတော့ကံ၊ဥာဏ်၊၀ီရိယဆိုတာဘာလဲဆိုတော့
ရှင်းမပြနိုင်ပင်မဲ့ ကိုယ်ဘာကိုနာလည်နိုင်အောင် အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကြားဖူးနေတဲ့ မြန်ဂေါက်သစ်သား၊ မြန်ဂေါက်သစ်သားဆိုတာ သူအများပြောကြတယ် မြန်ရင်မကောင်းဘူး ဂေါက်ရင်
အလွယ်တစ်ကူပြောပြီတော့ ဒါတွေဟာတိမ်တဲ့သူတွေကိုပြောတဲ့စကားပါ တကယ်တော့ကြိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးတော့လျှင်မြန်းအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ပိုပြီးအရင်ထက်quictly တွေပိုကောင်းလာတယ် ပိုပြီးတော့လဲလျှင်မြန်လာတယ်
တယ်လီဖုန်းတွေမှာဆို အရင်တုန်းကမပါဘဲနဲ့ တယ်လီဖုန်း တွေကို ဈေးအများကြီးပေးဝယ်ရပါတယ် ဒီနေ အများကြီးပါ ပြီးတော့ ကင်မရာတွေကော့ဘာတွေကော့ အကုန်လုံးထည့်သုံးနိုင်တယ် ဟမ်းဆက် တွေ
ဟာ ပေါပေါနဲ့ဝယ်လိုရတယ် ဒါတွေကိုသူတို့ ဘာလိုထုတ်ရောင်းနိုင်လဲ သူတို့ကြိုးစားမူပေါ့နော်။ ဒီတော့ကြိုးစားမူပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ မြန်ကောင်းသက်သာဆိုတာဖြစ်လာတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်လစီကတော့ မြန်၊ကောင်း၊
မေး ။ ။ အဲ့ဒီတော့ဆရာ ဒီစီပွားရေးတွေအားလုံးကို အစအဆုံးလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာတစ်ယောက်တဲ့စခဲ့တာပေါ့ ဆရာဒီစီပွားရေးတွေကို ဘယ်သူတွေကူညီပေးလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကထဲက ဆင်းရဲ့တော့ချမ်းသာချင်တာပေါ့လေ။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲ။
ကျွန်တော်တို့တွေခုနကလို မီးဖိုချောင်ကနေ ပြီးတော့ ပညာယူပြီးတော့ ကုမ္ပဏီကိုအုပ်ချုပ်တယ် ဆိုတာ မြင်တက်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒီလိုအမြင့် ရောက်အောင်လို့တော့ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်။
အဲ့ဒီလိုဘဲသူများတွေရှေ့မှာလုပ်တာ ငါတော့ဘာတွေလုပ်ရင်ရနိုင်မလဲ ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ စီပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအရောင်းအ၀ယ်နဲ့စခဲ့တာပေါ့လေ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းကိုငယ်ငယ်ကလေးထဲက၀ါသနာပါခဲ့တယ်
၀ါသနာပါတဲ့အလျှောက် နားလည် အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ နားလည်တဲ့ အတွက် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရင်း
ဘယ်ပစ္စည်းဘယ်နေရာမှာရှာရတယ်ဆိုတာ အပ်ကျတာကအစ သိနိုင်တယ်။ တကယ်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းခဲ့လို့ လဲအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းအများကြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။
မေး ။ ။ အရောင်းအ၀ယ်ကဘာလဲဆရာ သိလိုရလား။
ဖြေ ။ ။ အရာင်းအ၀ယ်ဆိုတာအစုံဘဲလေ။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းက မှောင်ခိုတွေလဲရှိတာဘဲလေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှတရားဝင်လုပ်တာမရှိဘဲ နဲ့ အားလုံးဟာမှောင်ခိုတွေဘဲလုပ်ကျတော့
ကျွန်တော်တို့အရောင်အ၀ယ်ဆိုတာက ဥပမာ ဆိုပါစို့ ပိတ်စတွေရောင်းတာ ဒါတွေကလဲအရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင် ကျိုင်းတုံဒေသကနေခိုးဝင်ရတာပေါ့။ ခိုးသွင်းတယ် ကျွန်တော်တို့ မြ၀တီကတော့
မဖွင့်သေးဘူးလေ။ ကော့သောင်းဘက်က၀င်ရင်ဝင် မ၀င်ရင်ကျိုင်းတုံဘက်က လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ ပြန်ဖြန့်တာပေါ့။ နောက်တစ်ခါ ဟိုဘက်ဈေးက ဒီဘက်ဈေးယူရောင်းတာတို့ ဒီနယ်ကလာတဲ့သူတွေကို
ကိုယ်ကဒီကနေပစ္စည်းတင်ရောင်းတာတို့ အဲ့ဒီလိုကနေလုပ်ငန်းစခဲ့တာ။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ ဟိုတုန်းကရွှေတစ်ကျပ်သားကို ၃၆၀ လောက်ထဲက ကျွန်တော်တို့အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လာတယ်။ ၄၆၅
ကျပ်လောက်အချိန်ပေါ့နော။် အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကတော့ ရွှေတစ်ကျပ်သားကို ၅ မူလောက်မြတ်ရင်ပုံမှန်ပေါ့။ နော်တစ်ကျပ်လောက်မြတ်ရင်တော့ လက်ခမောင်းခတ်ရတာပေါ့
အဲ့ဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့ အခုခေတ်နဲ့မတူဘူးပေါ့ အဲ့ဒါမျိုးတွေလဲ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်တယ်။ လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ အစုံလုပ်တာပေါ့လေ အဲ့ဒီကကမိဘကိုကူညီရင်ကနေ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကကုန်ကြမ်းပစ္စည်းလုပ်တယ်။
နောက်တစ်ခုက စက်တွေပျက်တော့စက်တွေပြန်ပြင်ရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းစက်တွေလုပ်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတော့စက်မူလက်မူလုပ်ငန်းကို အသက် ၁၄ နှစ်လောက်ကထဲက ကိုယ်ဘာသာကို အကုန်လျှောက်လုပ်တာလဲရှိတယ်။
အဲ့ဒီတော့စီပွားလုပ်တော့ အသက်၁၃၊၁၄နှစ်လောက်ထဲကစလုပ်တာပေါ့။ စက်မူလက်မူတွေကိုတီထွင်ပြီးမှဆရာ အသက်၁၈ ၁၉လောက်ကျတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့စက်တွေကိုကိုယ်ဘာကိုပြင်တယ် အဲ့ဒီလို စက်တွေကို သူများတွေ ဆီကနေ
၀ယ်နေတဲ့နေရာကနေ ကိုယ်ဘာကို စက်တွေလုပ်တယ် ပြီးတော့ရောင်းတယ်။ ပလပ်စတစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့လုပ်ရောင်းခဲ့စက်တွေဆိုရင် ဘတ်ထရီအိုး ထုတ်တာတို့ ဥပမာ နိုင်ငံခြားက၀ယ်ရင်များတယ်
ကျွန်တော်ဆီမှာ ၃သိန်းခွဲလောက် အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်ကဒီစက်တွေကို ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ ဒီသံတို၊သံစနဲ့ စက်အပျက်အဟောင်းတွေကို ပြုတ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကောင်းအောင်ပြန်လုပ်တယ်။
ဗီတာမင် ဘီ ၈
ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် (M.D) FAME Pharmaceuticals Industry Co.,Ltd.
ဗီတာမင် ဘီ ၇ (Vitamin B7)
မွေးရပ်မြေတောင်ကြီးက အမှတ်တရတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ပြန်လာတဲ့ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်း
နှုတ်ခေါင်းကို အာခေါင်နဲ့ထိပြီး အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၏ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ
၂၀၁၆-ခု ၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
MCB bank မှ CEO and M.D ဒေါက်တာ သောင်းဟန်
ရုပ် နှင့် နာမ် ဆိုသည်မှာ
ရင်သား လှပရန်အတွက် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု
မြန်မာနှစ်ဦးလွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြသူအချို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ သွားရောက်၊ ဥပဒေအရအကူညီပေးမည်ဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော
ရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီး မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သူ နှစ်ဦးကို ခေါ်စစ်ဆေး
Business Celeberity News General Knowledge Health & Beauty Heroscope Horoscope International News Interview IT News Local News
We provide also Myanmar Business Directory on Website and Mobile applications.
© All rights reserved. Developed by MM Cities.